Jacaylka: 5 Arin Oo Uuna La’aantiis Noolaan Karin. – Allsomali.net
HomeArimaha QoyskaJacaylka: 5 Arin Oo Uuna La’aantiis Noolaan Karin.
Jacaylka: 5 Arin Oo Uuna La’aantiis Noolaan Karin.
13 September 2020 allsomali Arimaha Qoyska, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Marka aan ka hadlayno jacaylka waxa fiican in aan mar walba xasuusano in uu farqi weyn u dhexeeyo la’aanta jacaylka Nolosheena iyo marka uu jacayl ku jiro nolosheena.
Sidaas darteed waxa fiican in uu qof walba oo inaga mid ah ogyahay in ay jiraan waxyaabo uuna jacaylku noolaan karin la’aantiis waliba qof walba oo wax jeceltahay in uu ilaaliyo si uu jacaylkiisu u noolaado.
hadaba halkan kaga bogo 5-da arin ee uuna jacaylku noolaan karin la’aantiis:
Daryeelka ayaa ah Aas-aaska ugu weyn ee jacaylka, ma jiri karo jacayl hadii uuna jirin daryeel waxana aan odhan karnaa waana cadaynta ugu weyn ee jacaylka, qofka doonaya in uu jacaylkiisu jiro muddo dheer waa in uu daryeelo qofka uu jecelyahay.
Qofka si dhab ah u jecel qof kale waxa uu mar walba u dadaalayaa sidii uu u daryeeli lahaa qofka uu jecelyahay sababta oo ah Ixtiraam la’aan jacaylku wuu dhintaa.
Waxa laga yaabaa in uu jiro qof wax walba oo uu samaynayo sabab u tahay qadarinta uu u hayo qofka uu jecelyahay waxana laga yaabaa in uu qofka kale dayaco sidaas darteed mar walba qadari qofka aad jeceshahay si aad u noolaysaan jacaylkiina.
ma jirto wax ka dhibaato badan qalbi wax jecel oo la khiyaameeyay sidaas darteed daacadnimada iyo in aad kaliya hal qof jeclaato oo aad qalbigaaga u hibayso ayaa muhiim u ah jacaylka.
Qofka wax jecel marna kama fikiro naftiisa, sababta oo ah waxa uu mar walba ku mashquulsanyahay in uu farxad galiyo qofka uu jecelyahay sidaas darteed naf hurida ayaa muhiim u ah jacaylka.
Dibadbaxayaal careysan ayaa dab qabadsiiyey dhismihii Laga Soo Tuuray Gabadhii Lagu Kufsaday Magaalada Muqdisho.